Awoodaha - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Horumarinta tiknolojiyada saarka iyo horumar ah ee geedi socodka been PCB ogolaan saarayaasha PCB daabacayo PCBs caadadii loogu talagalay iyo samatabbixin macaamiisha maalmood gudahood.
waqti Lead Standard PCB
Halkan PCB Wonderful, markii hogaanka loola jeedaa waqtiga waxaan u baahan nahay for daabacay loox circuit been abuurtay. Waxaa la tirin tan iyo wakhtigii shaqada labaad raacay by amarkaaga la helo lacag bixinta iyo xaqiijinta file. Fadlan la soco in aysan ka mid ah maalmaha fasaxa ah ama maalmaha fasaxa.
Guud ahaan, markii aannu hogaanka ku xiran tahay adayga aad design circuit iyo shuruudaha caadadii aad. Waxaan nahay awood u leh in noocooda loox 3-7 maalintii. Sida wax soo saarka PCB caadiga ah, waxaan ku siin 3 fursadaha markii hogaanka. Fadlan tixraac jadwalka soo socda ee info faahfaahsan. Waxaad dooran kartaa waqti hogaanka aad la doonayo marka xiganaya online, waxaan xisaabiyo doonaa kharashka PCB ku saleysan waqti hogaanka aad looga baahan yahay sida.
Fiirsaneysa inay mashaariic qaar ka mid ah jadwal badan gaaban dooneynaa, gaar ahaan marka aad waqti badan ku qaataan on design PCB ama engineering-yada iyo u baahan tahay in la qabsado oo la-soo-saarka ah, waxaan ku siin PCB Adeegga Deg-si aad dambeysta ah. Waxaan nahay awood daabacayo loox PCB aad la tayo sare leh la mid ah sida aan u ballanqaaday on our Standard Services PCBs bilaabo 2 maalmood. kharash dheeraad ah la dhacay doonaa dedejinta amar PCB aad.
U baahan tahay si PCB degdeg ah? Si xor ah u wada hadlaan shuruudaha aad nala at wonderful@wonderfulpcb.com .